Uru na ROI sitere na Mgbakọ | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 17, 2011 Saturday, January 12, 2013 Douglas Karr
Nzukọ nke mbụ m gara bụ ngosi ngosi teknụzụ mpaghara. Abụ m onye ọrụ ọkụ eletrik na akwụkwọ akụkọ na onye isi m agaghị akwụ ụgwọ ya. N'ihi ya, akwụrụ m ụzọ nke m. Anyị nwere usoro ebu ebu na eletriki magnetik nso switches nwere ga-enwe ndị dị otú ahụ dị nso n'akụkụ akụrụngwa na ha ga-esi dọwara adọwa gburugburu. Anyị gafere ọtụtụ narị n’ime ha ma nke ọ bụla n’ime ha bụ otu narị narị dọla. Na ngosi ahụ, ahụrụ m ụlọ ọrụ nke jiri ọtụtụ ụdị, nha na nhazi ịdị anya dị nso ha. Anyị nwalere ihe mmetụta ọhụụ, dị ọnụ ala karịa nke nwere oghere dị obosara… na agaghị edochi otu ọzọ.
Nzukọ a zọpụtara ụlọ ọrụ anyị ọtụtụ iri puku dollar, mana onye isi m agaghị emefu $ 20 ma ọ bụ karịa ịbanye. Ọ bụụrụ m ihe mmụta ndụ na nzukọ dị oke ọnụ ahịa ha na ọla edo. Ya mere, ọ na-eme ka m mata na e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-enweghị ọbụna mmefu ego iji gaa ogbako mpaghara, nke mba ma ọ bụ nke mebere! Nke anyi Zoomerang ngagharị a na-eme kwa izu gosiri na ihe karịrị 25% enweghị ego ọ bụla maka ọgbakọ ọ bụla! Nzukọ dị iche iche. Ọ bụghị nanị na ha na-eme gị obi ụtọ n'ihi na ndị ọgbọ gị gbara gị gburugburu, ha na-eweghachi usoro echiche gị ma mee ka ị chee echiche n'èzí ụlọ ọrụ gị.
Nzukọ mba - kwuo eziokwu, ọ naghị esiri m ike ịga nnọkọ na ọgbakọ mba! M na-etinye oge m n'ụlọ ndị na-ere ahịa ma na-agagharị ma na-agagharị na ndị isi ụlọ ọrụ. N’abalị, ị nwere ike ịchọta m na ụlọ nkwari akụ ọ bụla nke na-enye ndị ọbịa. Mkparịta ụka nke ndị isi ụlọ ọrụ dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị hapụ onye ọrụ gị gaa ọgbakọ mba, nye ha ego mmefu ego ka ha nwee ike ịzụta atụmanya, onye na-ere ahịa, ma ọ bụ onye isi ụlọ ọrụ ọ aụ aụ ma ọ bụ abụọ. Nke ahụ bụ ebe anwansi na-eme!
Mgbakọ mpaghara - Ọ bụrụ n’ịchọrọ ile anya n’obodo, ị ga-abụ nnukwu mpaghara. M hụrụ n'anya na-eduga sessions na mpaghara nzukọ. Ọ na-enye m ohere iji nwalee ihe ngosi ọhụrụ site na ndị na-ege ntị maara nke ọma na izute mpaghara mpaghara. M na-aga nnọkọ na nnọkọ mpaghara ma na-agbakarị ihe ọ drinksụ drinksụ mgbe a gbasara. Oge ụfọdụ nnọkọ ahụ na-adị ntakịrị ma ọ bụ na-ere ahịa… mana ọ na - abụkarị m na - apụ na ozi m nwere ike iji. Nzukọ ndị a amachaghị ọnụ, ya mere, ROI dị mfe ịme.
Nzukọ mebere - ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ma ọ bụ na-ekwu okwu, ọ nweghị nloghachi ka mma karịa nzukọ ọgbakọ. Ndị mmadụ na-aga ihe omume ndị a iji mụta ma zụta. Ọ bụrụ na ha nwere mmasị ịhụ onye ga-ekwu okwu, ha gaara aga ọgbakọ ahụ. Azụmaahịa anyị na-apụ na nzukọ ọgbakọ (maka ụlọ ọrụ 2 ikpeazụ m rụchara ọrụ) adịgoro ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị bụ onye bịara, ọ mara mma - ị nwere ike ịhapụ, laghachi, hụ ngosi ọ bụla ịchọrọ, ma mee ya site na tebụl gị (ma ọ bụ ihe ndina ya).
Enweghị ogbako? Ana m ekwu eziokwu ma na-agwa gị na ụbụrụ gị (maọbụ ọ bụrụ na ị bụ onye isi brain ụbụrụ nke ndị ọrụ gị) na-atụgharị mush. Si n'ọfịs pụọ ma gaa kwụọ ụgwọ! Ọ bụrụ n’ị bụ onye isi, maa ndị ọrụ gị aka ịlaghachi na atụmatụ atọ dị mkpa ga-emeri ụgwọ njem na ụgwọ nke tiketi ahụ. Y’oburu na ibu onye oru, kwere onye isi gi nkwa na ighachi azu uzo ato ato ga adighi agha!
Iji chọta nzukọ, ọ masịrị m Igwe na Lanyrd. Nnukwu nzukọ 3 kachasị amasị m BlogWorld Expo, Webtrends Gbanye, na ExactTarget Njikọ. N'ebe a na Indiana, BlogIndana bụ ọkacha mmasị. Na mebere nzukọ - M hụrụ ihe niile n'anya Social Media Examiner ihe omume na ụda nke ndị ọzọ!
Biko kwuo okwu na nzuko kachasi nma gi na ma ha bu ndi obodo, mpaghara ma obu nke mebere!
Tags: ogbako ahia emailogbako ahiaogbako mgbasa ozi
Nov 17, 2011 na 2:26 PM
Akwa post, Douglas. Nzukọ bụ ụzọ dị iche iche iji jikọọ na ndị ọzọ nwere uche. Ana m alaghachi azụ mgbe niile site na ha na-enwe ume na obi ụtọ banyere ọtụtụ njikọ ọhụrụ m megoro. Ana m alọghachite ma ọ dịkarịa ala otu echiche nwere mmetụta dị ukwuu na azụmahịa m. Ana m agba ụlọ ọrụ niile ume ka ha hụ na ha na-aga nzukọ dị mkpa na niche ha.
Nov 17, 2011 na 7:23 PM
Ewezuga ohere ịkparịta ụka n'networkntanet, nke ruru ọnụ ahịa nnabata n'ọtụtụ nzukọ, itinye uche na ahịa pụrụ iche nwekwara ike ịmị mkpụrụ. CES dị mma maka imikpu onwe gị na teknụzụ kachasị ọhụrụ na nke kachasịnụ maka ndị na-azụ ahịa, mana ịme njikọ na nzukọ nlekọta ahụike mpaghara, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ịnye gị ụzọ egwu na azụmaahịa teknụzụ ahụike, nke na-aga n'ihu ugbu a.
Nov 17, 2011 na 7:43 PM
Echere m na ndị PR anyị nọ na DittoePR nwere ezigbo nsonaazụ na CES, Zoyd. Akwa aro!